Subzọ ụgbọ elu Gayrettepe Istanbul ga-emeghe na njedebe nke 2020 | RayHaber
HomeTurkeyMpaghara Marmara34 IstanbulA ga-emeghe ụzọ ụgbọ elu Gayrettepe Istanbul na njedebe nke 2020
18 / 11 / 2019 34 Istanbul, ụgbọ okporo ígwè, General, KENSİÇİ Rail Systems, Isi akụkọ, Mpaghara Marmara, Metro, Turkey
gayrettepe istanbul ọdụ ụgbọ elu ga-emeghe na njedebe nke afọ
A ga-emepe ahịrị okporo ụzọ ọdụ ụgbọ elu Istanbul na njedebe nke afọ 2020; Cahit Turhan, Mịnịsta nke Transportgbọ njem na akụrụngwa, onye mekwara nyocha banyere ọdụ ụgbọ elu Istanbul, kwuru na ihe owuwu ụzọ okporo ụzọ nke atọ na-aga n'ihu na ahịrị Gayrettepe na Istanbul Halkalı A ga-arụ ọrụ n'ahịrị na njedebe nke 2021 kwuru
onwe Anyị na-ese na ọnwa nke June maka oghere nke-atọ runway Turhan bụ a guest on Ankara Bureau, ma 29 yiri ka ha si n'ime ọrụ na October, "ka o kwuru na aka iso:" Ya mere, ụwa ga na-enweta na Turkey ike ọdịda n'out oge na atọ tracks nke USA. Nke a ga-ebelata oge taxi. Ndi nkatọ nke ọdụ ụgbọ elu ọhụrụ ahụ nwere naanị arụmụka fọdụrụ. Ha na-ekwu na oge taksi dị ogologo. Ana m atụ ya oge ọ bụla. Enwere ike ịchọta 27-28 kachasị na nkeji. Site n'ụzọ nke atọ, oge a ga-akacha mkpụmkpụ. ”
Minista Turhan kwupụtara na a ga-etinye eriri Gayrettepe n'ọrụ na njedebe nke afọ na-esochi na ọdụ ụgbọ elu ọdụ ụgbọ elu Istanbul. Halkalı A ga-arụ ọrụ n'ahịrị na njedebe nke 2021 kwuru. anyị ga-arụ ọrụ. Turhan kwuru na a ga-eru ikike iburu ndị njem 350 puku kwa ụbọchị na ntụzi aka nke ọdụ ụgbọ elu ahụ wee kwuo, bilir m nwere ike ikwu na ọrụ ụgbọ oloko ụgbọ ala na nke mba anyị eruola ọkwa mmecha. Ọrụ ahụ na-aga n'ihu na ụlọ ọrụ anyị TÜLOMSAŞ na Eskişehir. Anyị ga-anwale mbanye na 2020 afọ. Mgbe ụdị izizi nke mbụ ahụ gasịrị, anyị ga-amalite imepụta oke n'usoro kwekọrọ n'ihe ndị ga-esochi ”.
Subway Line Gayrettepe Istanbul dị na 2020…
Wayzọ ụgbọ elu Gayrettepe-Istanbul na 5 District…
Flash Development na Gayrettepe Istanbul Airport ụzọ ụgbọ oloko
Gayrettepe-Istanbul Airport Metro Construction Na-arụ Ọrụ Ngwa Ngwa
Istanbul Airport na-adọba ụgbọala ruo mgbe ngwụsị nke February!
Ọdụ ụgbọ elu ọhụrụ nke Tokat iji mepee na 2020
Airportgbọ elu ọdụ ụgbọ elu Istanbul nke atọ
Zọ ụgbọ elu nke ọdụ ụgbọ elu Istanbul
Kedu mgbe ọdụ ụgbọ elu Istanbul na-emeghe
Istanbul Airport-Halkalı ụzọ ụgbọ oloko
Halkalı Wayzọ ụgbọ elu Istanbul Gayrettepe